खै त सम्बन्ध बिच्छेद पछी मनोज गजुरेल संगको अन्तरबार्ता ?? सम्बन्ध बिच्छेद : २२ बर्षको सम्बन्ध लाइ एकतर्फी अन्तरबार्ता बनाउदैमा विश्वास जित्न सकिन्छ र ? यो कस्तो पत्रकारिता ? भिडियो सहित !! - Enepalese.com
खै त सम्बन्ध बिच्छेद पछी मनोज गजुरेल संगको अन्तरबार्ता ?? सम्बन्ध बिच्छेद : २२ बर्षको सम्बन्ध लाइ एकतर्फी अन्तरबार्ता बनाउदैमा विश्वास जित्न सकिन्छ र ? यो कस्तो पत्रकारिता ? भिडियो सहित !!
इनेप्लिज २०७४ माघ २१ गते १४:४० मा प्रकाशित
चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको श्रीमती मिनासंग डिभोर्सपछि उनले सार्बजनिक रुपमै यसको बारेमा खोलेका छन् । उनको डिभोर्सको चर्चासंग उनले फेसबुक मार्फत यसको बारेमा थप प्रष्टाउन खोजेकाछन् । उनले आफू र मिनाबिचको सम्बन्ध आफू खुसी राजी भएर टुटाएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्–‘जीवनका धेरै पाटा मध्ये पारिवारीक व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण हो, जुन मैले गर्न नसकेकोमा क्षमाप्रार्थी छु । हामी दुबै गलत होईनौं तर फरक रहेछौ. ।
हर्रौ उनले पहिलो पटक डिभोर्सबारे के–के बोलेका छन् ? फेसबुकमार्फत । यहि संदर्बमा अस्ट्रेलिया बाट शिव न्यौपानेजी ले आफ्नो प्रतिक्रिया यसरी दिनु भएको छ तपाई लाइ कस्तो लाग्छ हेरौ भिडियो सहित !